Wararka Maanta: Sabti, July 17, 2021-Bandhiga buuga Hawaale Warran oo lagu qabtay magaalada Hargaysa
Abwaanka ayaa buugan kaga sheekaynaya noloshiisa, taariikhda Soomaalida gumaystihi kahor, kadib, dowladi kacaanka, burburkii iyo mustaqbalka.
Inkasta oo uu Hadraawi xanuunsana oo aanu xaflada iman hadana waxa soo buux dhaafiyay kumanaan qof oo ku koray dhagaysiga suugaanta qarniga ah ee abwaanka.
Waxa kale oo goobta joogay saraakiil xukuumada Somaliland ka tirsan, madaxda mucaaradka, bulshada rayid ka ah, dhaqan yaqaano iyo saaxiibadii qadiimiga ahaa ee Hadraawi.
"Maxammed Ibraahin Warsame macalin joogto ah ayuu aha, la socodkiisa ayaad wax ka baranaysay" sida waxa Hadraawi ku sifeeyey qoraaga caan ka ah ee Boobe Yuusuf Ducaale oo ay saaxiibo dhaw yihiin abwaanka.
Pro: Xuseen Bulxan oo abwaanka aqoon gaara uleh, ayaa isna sheegay in Hadraawi uu ka tagayo dhaxal ma guurto ah.
"Hadraawi waxa uu inoo qabtay inaga iyo jiilasha soo socda lama tirin karo" ayuu yidhi.
Bulxan ayaa dhinaca kale sheegay in Hadraawi uu aha macalin nololeed oo dhaqanka iyo hidaha Soomaalidu kuwayn yahay.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, ayaa sifeeyay waxtarka iyo wax qabadkii Hadraawi.
"Hadraawi wuxuu aha macalin, wuxu ahaa abwaan, wuxuu aha halgamaa" ayuu yidhi.
"Hadraawi wuxuu aha samafale, anigoo safaaradii Moscow jooga ayuu ila soo hadlay si nin mujaahid aha aan dhakhtar u geeyo" ayuu hadalkiisa ku daray.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxammed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Hadraawi uu ahaa abwaan aan ku bakhayli jirin in uu sheego libta suuganyahanka kale.
"Had iyo jeer suugaanyahanku way tartamaan, nin Hadraawi bakhayl kama aha in uu qiro raga suuganyahan ka ah" ayuu yidhi.
"Waxa ka markhaati ah, raga ugu badan ee uu ku halqabsado Duncarbeed baa kamida, wuxu ku halqabsada Xasan Ganay.." ayuu hadalkisa ku daray.
Xaflada bandhiga buuga ayaa sidookale waxa lagu soo bandhigay sugaan kala duwan oo uu abwaanku curiyay.
Hadraawi ayaa ah mid kamida suugaan yahanada ugu waa wayn ee taariikhda casriga ah ee Soomaalida
Abdilahi Abdi Rahman, Hiiraanonline